Ardayda oo aan ka maqnaan karin maadada aysan rabin | Somaliska
Gudiga iskuuladda magaaladda Stockholm ayaa soo saaray sharci cusub oo adkeynaya in ardeyda iyo waalidoontooduba aysan diidi karin maadooyinka aysan rabin. Tusaalle ahaan maadooyinka la xirriira aqoonta galmada iyo dabaasha. Maamulka iskuulka oo keliya ayaa go'aan ka gaari kara in ardayga uu badalan karo maadada iyo in kale, ardaygii diida in uu maado u fariistana waxaa hoos u dhac loogu qori doonaa shahaadada dhameystirka iskuulka. Arintaan ayaa si toosa u taabaneysa ardayda Muslimiinta qaasan kuwa soomaalida iyo waalidkood. Waalidiinta iyo ardeyda aan arrimahaasi xiiseyn ayaan la ogeyn sida ay arki doonaan ama ka oran doonaan.
Ardayda oo aan ka maqnaan karin maadada aysan rabin
Gudiga iskuuladda magaaladda Stockholm ayaa soo saaray sharci cusub oo adkeynaya in ardeyda iyo waalidoontooduba aysan diidi karin maadooyinka aysan rabin. Tusaalle ahaan maadooyinka la xirriira aqoonta galmada iyo dabaasha.
Maamulka iskuulka oo keliya ayaa go’aan ka gaari kara in ardayga uu badalan karo maadada iyo in kale, ardaygii diida in uu maado u fariistana waxaa hoos u dhac loogu qori doonaa shahaadada dhameystirka iskuulka.
Arintaan ayaa si toosa u taabaneysa ardayda Muslimiinta qaasan kuwa soomaalida iyo waalidkood.
Waalidiinta iyo ardeyda aan arrimahaasi xiiseyn ayaan la ogeyn sida ay arki doonaan ama ka oran doonaan.
Masaajida Sweden oo la siinayo lacag amaanka lagu sugo
Magaalada Borlänge oo 2 maalmood u dabaaldagaysa dhaqanka Soomaalida
Wiil Soomaali ah oo dahab ka xaday qoyska boqortooyada Sweden